ရွာချင်းဆက် လမ်းပိုင်းအချို့ခင်းရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ? - Yangon Media Group
ရွာချင်းဆက် လမ်းပိုင်းအချို့ခင်းရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ?
မွန်ပြည်နယ်၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းပိုင်းအချို့ခင်းရန် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ညွှန် ကြားချက်ဖြင့် တင်ဒါကင်းလွတ်ခွင့်ပြု ခဲ့ခြင်းဟု မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ လွှတ်တော်အတွင်း ဖြေကြားချက်သည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ကွဲလွဲနေသဖြင့် ပြန်လည်စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒီချုပ် ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ပြော ကြားလိုက်သည်။ ”ဒါက လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နဲ့တော့ ကွဲလွဲ နေတယ်။ ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ ပြန်လည်စစ်ဆေးရမယ်”ဟု ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ မေ ၄ ရက်တွင် ပြောသည်။
မွန်ဝန်ကြီးချုပ်၏ အဖြေသည် လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘဲ နိုင်ငံ တော်အကြီးအကဲကို ကာဗာလုပ် ခြင်းဟု ထင်မြင်မိကြောင်း မွန်လွှတ်တော် ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ အောင်နိုင်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ မေ ၃ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ချောင်းဆုံမြို့နယ် အမှတ်(၁)တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ် တော် ဒုဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သည့် ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးက ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် Mini Budget ဖြင့် မွန် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရွာချင်းဆက် လမ်းအချို့ ဖောက်လုပ်ရာတွင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို တင်ဒါမခေါ်ဘဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ မေးမြန်းခဲ့သည်။
မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေ ကြားခဲ့ရာ မည်သည့်စာအမှတ်ဖြင့် ညွှန်ကြားသည်ကို သိရှိလိုကြောင်း မေးမြန်းခဲ့ကြောင်း ဒေါက်တာအောင် နိုင်ဦးက မေ ၄ ရက်တွင် ပြောသည်။ ယင်းထပ်ဆင့်မေးခွန်းအပေါ် မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ အေးဇံက ပြန်လည်ဖြေကြားရာ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် က နှုတ်ဖြင့်ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
”အဲဒီညွှန်ကြားချက်ကို စာနဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ မိုးတွင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ငန်းအခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် နိုင်ငံ တော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ဆုံတဲ့အချိန်မှာသူတင်ပြတော့ နိုင်ငံ တော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘော မျိုးနဲ့သူကပြောတယ်” ဟု ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးက ပြောသည်။ ယင်းဖြေကြားချက်မှာ မဖြစ် နိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးက ဆိုသည်။
”ကျွန်တော့်အထင် ပြောရ ရင်တော့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ အဲဒီလိုကြီးတော့ ဘယ်ပြောမလဲ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရုံးက ထုတ်ပြန်ရမယ့်ဟာကို နိုင်ငံ တော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က သူ့ သဘော၊ သူ့ဆန္ဒနဲ့ လုပ်စေသတည်း လို့ သွားလုပ်လို့ဘယ်ရမလဲ။ ခွင့် ပြုမယ်ဆိုရင်တောင်မှ အထပ်ထပ် တင်ပြ ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ ညှိနှိုင်း ပြီး ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တောင်မှ စာနဲ့ ပေနဲ့ ထုတ်ပြန်ရမှာလေ။ ကျွန် တော့်သဘောကတော့ နိုင်ငံတော် ၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိလ်အနေနဲ့ နှုတ် နဲ့ အဲဒီလိုမျိုး ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ သူ့ရဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကို ကာကွယ် ချင်တဲ့ဇောနဲ့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင် ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ညွှန်ကြားသွားတယ် လို့ ပြောသွားတယ်လို့ပဲ ကျွန်တော် ထင်တယ်”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဒီချုပ်လွှတ်တော်မှ အသေးစိတ်စိစစ် ရန်လိုအပ်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်များက လည်း ပူးပေါင်းပါဝင်သင့်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ အစိုးရတစ်ရပ်အနေဖြင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိမှသာ ပြည်သူ လူထု၏ ယုံကြည်မှုကိုရရှိမည်ဖြစ် ကြောင်း ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦး က ပြောသည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မွန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအေးဇံ ကို ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်သော်လည်း ဖုန်းမကိုင်ပေ။
မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ ဖြေကြားချက်သည် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် နှင့်ကွဲလွဲနေသည်ဟု အမျိုးသားဒီ မိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ပြောသည်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် နှုတ် မိန့်ဟူသည်မရှိကြောင်း နိုင်ငံ တော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘားအံမြို့၊ လူထုတွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုတွင် ပြောကြား ထားသည်။ တင်ဒါများကို လက်တစ်လုံး ခြားဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန်လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က မကြာသေးမီက သတိပေးထားသည်။
ရလဒ်ဆိုးများအတွက် ကစားသမားများတွင် တာဝန်ရှိဟု ဟာရဲရားဝန်ခံ၊ အသင်းမှ ထွက်ခွာလိုနေသော ပေါ့ဘ
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဘဏ်ချေးငွေ ထုတ်ပေးခဲ့သဖြင့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်ကို တရားရုံ?
ဗန်းမော်နှင့် မန်စီမြို့နယ် အကြားရှိ ဗန်းမော် – မန္တလေး မဟာဗျူဟာ လမ်းပေါ် ရေကျော် နစ်မြုပ်မှုေ??
ကမ္ဘာ့သစ်များနေ့ အခမ်းအနားကို မန္တလေးမြို့တွင် သုံးရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပ